Sheekh Shibli oo Si Kulul uga Hadlay Laaluushka Lagu Bixinayo Doorashooyinka Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Sheekh Shibli oo Si Kulul uga Hadlay Laaluushka Lagu Bixinayo Doorashooyinka Soomaaliya
Sheekh Shibli oo Si Kulul uga Hadlay Laaluushka Lagu Bixinayo Doorashooyinka Soomaaliya
Waxaa maalmahan baraha bulshada aad loogu faafiyay muuqaal laga duubay Sheekh Maxamuud Shibli oo kamid ah culumada Soomaaliyeed kaas oo uu kaga hadlayay dhibaatooyinka laga dhaxli karo laaluushka la sheegay in ay musharrixiinta qaar doonayaan in lagu doorto iyo saameynta uu ku yeelan karo masiirka hoggaanka umadda Soomaaliyed.
Sheekh Shibli ayaa sheegay in uusan bannaaneyn in laaluush la qaato balse ay kasii xuntahay in codka la siiyo shakhsi aan ku habbooneyn hoggaanka dalka, wuxuuna kula dardaarmay labada Aqal ee Barlamaanka Soomaaliya in ay dib isugu noqdaan oo aysan laaluush qaadasho iyo kitaab la mariyay intuba aysan saameyn ku yeelan doorashada iyo shakhsiga ay codkooda siinayaan.
“Dadka Golayaasha noqonaya laba xaalo yeysan isku darin baan oran lahaa. Laaluush xaaraan ah inaad qaadataan oo ay nacalad daba socoto iyo inaad umaddii khiyaantaan. Waa laba dambi inaad laaluush qaadato ama qof dad kaga habboon ay taaganyihiin inaad u codeyso waa mid labaad. Hadduu mid kaa dhaco inaad mid labaad ku darto waa dambi iyo xaaraan.” Ayuu yiri Sheekh Shibli.
Sheekh mar uu ka hadlayay dhaarta la mariyo xildhibaannada laaluushka qaata si ay ballanta u dhawraan in ay lamid tahay adiga oo lagu jajuubay sidaas darteedna ay xildhibaannada ka bixi karaan ballamahaas iyo dhaartaas macsida ah.
“Waxaa dhici karta in qofku laaluush soo qaatay. Waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo ballan ayaan galay. Adeer ballan kuguma laasimto. Kitaab lagu mariyay kuguma laasimayo. Wax ballan iyo dhaar ah oo uu sharcigu kugu waajibiyay ma jirto. Dhaar aad macsiyo ku dhaaratay weeye ee 10 miskiin oo aad kafaaro gud qado u siisay ayaa kaaga filan.”
“Walaalayaaloow bahalka laaluushka ah iska daaya inta dhiman oo wixii tagayna ka towbad keena. Dambiga laaluush qaadashada ah haku darina inaad u codeysaan cid aan mudeyn. Shilimadka xun ee xaaraanta ah ee aad cuneysaanna berri bay idinka dhammaan. Adigana waad gaajeysantahay, umaddana tuug khaa’in ah oo beenaale ah ayaad u tahay, aakharana cadaab baa ku sugaya. ”
Muuqaalkan aadka loogu faafiyay baraha bulshada ayaa soo jiitay dadka isticmaala aaladdan, waxaadna moodaa in ay bilaabatay baraarug xooggan oo ay bulshada ku dooneyso in laaluushka uusan go’aamin cidda dalka hoggaamineysa balse mudanayaashu ay ku kala xushaan musharrixiinta aqoon, karti, wadaniyad iyo waayo aragnimada ay uleeyihiin in ay qabtaan xilalka ugu sarreeya dalka.
Previous articleAMISOM oo Shabellaha Hoose ku dishay in ka badan 70 neef
Next articleMaxaa ka jira in Turkish Airlines ay joojisay duulimaadyadeeda Soomaaliya